War Rasmi ah: Sacuudiga oo dhameestiray iibsashada Kooxda Newcastle United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha War Rasmi ah: Sacuudiga oo dhameestiray iibsashada Kooxda Newcastle United
Qoyska Boqortooyada Sucuudiga ayaa si rasmi ah u iibsaday kooxda horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League kaddib sannad iyo dheeraad ah hawshan soo wadaan, taas oo ugu dambayntii qalinka loogu duugay milkiyaddeedda markii laga qaaday xayiraaddii telefishanka beIN Sports.
Mohamed bin Salman ayaa ku biiraya liiska mulkiileyaasha kooxaha Premier League isaga oo wakiil ka ah qoyskiisa.
Heshiis xalay laga sii shaqeeyey ayaa hadda si rasmi ah loogu dhawaaqay in Sucuudi Carabiya ay £300 milyan oo Gini ku iibsadeen Newcastle United, taas oo soo afjaraysa muddo 14 sannadood ah oo uu Mike Ashley ahaa mulkiilaha naadigan.
Shirkadda Sucuudiga u qaabbilsan maalgelinta ee Public Investment Fund ee ay iska leeyihiin qoyska Boqortooyada ayaa waxay yeelan doontaa 80 boqolkiiba mulkiyadda kooxdan, halka walaalaha Reuben iyo Amanda Staveley ay kala yeelan doonaan min 10 boqolkiiba.
Tababare Steve Bruce ayaa la filayaa in si degdeg ah shaqada looga caydhiyo, isla markaana loo dhiibo naadiga Antonio Conte, Frank Lampard ama Jose Mourinho inkasta oo tababaraha reer Portugal uu dhowaan la wareegay AS Roma.
Qoyska boqortooyada Sucuudiga oo hantidooda lagu qiyaaso in ka badan £320 bilyan oo Gini ayaa waxay kooxdooda Newcaslte United ka qanisanaanaysaa naadiyada lacagta badan haysta ee laga leeyahay dalalka Carabta ee Manchester City oo ay qoyska reer Abu Dhabi ee Imaaraadka Carabtu leeyihiin iyo Paris Saint-Germain oo qoyska boqortooyada Qatar iska leedahay.
Newcastle United ayaa noqon doonta awood cusub oo kusoo kordha horyaalka Premier League iyadoo ciyaartooyo waaweyn soo iibsan doonta suuqyada soo aaddan, taas oo sii kordhin doonta xafiiltanka iyo xiisaha horyaalka.
Previous articleLuke Shaw oo ka hadlay dhibaatada Jadon Sancho ku heysata Kooxda Manchester United
Next articleManchester United, iyo Manchester City oo ku dagaalamaya Xidiga lagu qiimeeyo 93 Milyan